पूर्वी नेपालको कोच समुदाय राजवंशी नामले परिचित छ । यो समुदाय मोरङ र झापा जिल्लाका विभिन्न भागमा विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । राजवंशीको अर्थ हुन्छ “राजपरिवार” अर्थात् “राजवपरिवारसंग आबद्ध” । राजामहाराजाको वंशका भएकाले यिनीहरूले आफूलाई राजवंशी भनेका हुन् । यसले के कुरा बुझाउँछ भने यो समुदायको कुनै समय समृद्ध राज्य र सम्पन्न संस्कृति थियो । राजबंशी जातिलाई कोच अर्थात् कोचे भनेर पनि चिनिन्छ ।
आर्यहरूको आगमन भन्दा अगाडिदेखि नै आफ्नै संमृद्ध संस्कृति र गौरवशाली परम्परा चलाएर राज्य गर्दै आएका कोच आफूभन्दा बढी शक्तिशाली र समुन्नत ठहर्‍याएका जाति र वर्गहरूका अगाडि आफ्नो आत्मसम्मान र मर्यादामा क्रमसः पतन हुन थाल्यो । धेरैजसो कोच ब्राम्हण पुरोहितहरूका जजमान बन्न थाले । उनीहरूले लुकीछिपी जात बदल्न थाले । सभ्य बन्नको लागि आफ्नो जातको नाम बदलेर आफूलाई राजपूत सरहको राजवंशी भन्न थाले । तर यसबाट कोचहरू बीचमा फूट आयो । फलस्वरुप राजपरिवार तथा सम्पन्न कोचहरू राजपूत सरह राजवंशी हुन सफल भए भने कोही मुसलमान धर्म ग्रहण गर्न पुगे (विष्ट, डोरबहादुर, २०५५) । अहिले राजवंशीलाई सामाजिक रूपमा तीन समूहमा बाँडिएको देखिन्छ (१) हिन्दू राजवंशी (२) मुसलमान राजवंशी र (४) कोच (Gautam R., A. Thapa-Magar A(1994) । राजवंशीको सामाजिक अवस्था निकै जटिल छ । प्रा. ईश्वरगोविन्द श्रेष्ठका अनुसार राजवंशी जातिमा चारवर्ण व्यवस्था छ जो यसप्रकार छ– (१) ठाकुर गोसाई (कुलगुरु), (२) चन्द्रवंशी खोत्री राजवंशी, (३) बोङाहा, ताजपुरिया, गेनगाइ, कोच र (४) कोच, कहार, हाडी (श्रेष्ठ, २०४२) । यसरी यो जातिभित्रै पनि उँच नीचका आधार स्वयम् आफ्नै जातिबाट निर्माण भएको पाइन्छ । कोच राज्यको पतनपछि हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले यो जातिको परम्परागत सास्कृतिमा प्रभाव पारेको र सास्कृतिक रूपमै सामाजिक विविधतालाई पश्रय मिलेको देखिन्छ । बर्तमानमा ताजपुरिया तथा गनगाई जातीय संघ, संगठन आफू राजवंशीभन्दा अलग्गै संस्कृति भएको दावी गर्दछन् । ती समुदाय आफ्नो मौलिक पहिचानमा जुटेको अभियन्ताको भनाइ छ (M. Tajpuriya, Personal communication, Apr 30, 2022) ।
प्रस्तुत कार्यपत्रका मुख्य उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन् :
२.१.१ गर्भावस्था: राजवंशी समुदायद्वारा गर्भावस्थालाई दोजुआ भनिन्छ र यो अवस्थालाई महत्वका साथ हेरिन्छ । गर्भावस्थामा महिलालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा दुःख दिनु हुँदैन, काममा धेरै लगाउनु हुँदैन, टाढा जान नहुने, खोला तर्न नहुने, नउफ्रने, गह«ौं भारी बोक्न नदिने मान्यता रहेको पाइन्छ । गर्भावस्थामा तनाव भएमा पेटको बच्चालाई पनि नराम्रो असर हुन्छ भन्ने ठानिन्छ । गर्भवती महिलाले नराम्रो कुरा नसुन्ने र नहेर्ने भनिन्छ । यसबेला बाँदर र घोडा हेर्न अशुभ मानिन्छन् । गर्भावस्थामा महिलालाई भूतप्रेत लाग्छ वा देवीदेउता रिसाउला भनेर विशेष ख्याल राखिन्छ । बच्चा खेर गएको वा पहिले वच्चा मरेको भएमा त्यस्ती महिला गर्भवती भएको बेलामा विशेष सतर्कता अपनाइन्छ । भूतप्रेत भगाउन सिरानी मुनि कचिया राख्ने, जडिबुटी लगाउने गरिन्छ । माइतीमा प्रसूतीपूर्व छोरी वा दिदीबहिनीलाई बोलाएर खीर वा अन्य परिकार खुवाउने चलन रहेको पाइन्छ ।
२.१.२ प्रसूती अवस्था : यस अवस्थामा प्रसूती गराउन दायानी वा कन्ढुकी र लौवा वा ठाकुर वा हजामको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ब्यथा लागेपछि दायानीले स्याहार्ने गर्छिन् । आजकल गाउँघरमा दायानीलाई सूडेनी पनि भनिन्छ उनीहरूले नै बच्चा जन्माउन मद्दत गर्छन् । ब्यथा लामो लागेमा यिनले अस्पताल लैजाने सल्लाह पनि दिन्छिन् । घरमा बच्चा जन्मदा कन्ढुकीले बच्चाको नाल काट्ने गर्दछन् । बच्चा जन्मेपछि सफा नाङ्लोमा राखेर घरदेवता, सूर्यदेवता, गाउँदेवता तथा अन्य देवीदेवताको आशिर्वाद प्राप्त गरिन्छ ।
२.१.३ विवाह : राजवंशी जातिमा विवाह गर्नको लागि कर्वा अर्थात् मध्यस्तकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । केटाको पक्षबाट जाने मध्यस्तकर्तालाई केटीको पक्षबाट नगद राशी अर्थात् चुमानको प्रस्ताव गरिन्छ । यदी प्रस्ताव अनुसार केटापक्षबाट भर्न सकेमा तत्काल विवाहको लागि स्वीकृति मिल्न सक्छ । जसले माग बमोजिम चुमान बुझाउन सक्दैन त्यस अवस्थामा केटाले केटीको घरमा निश्चित अवधि बसेर काम गरिदिनु पर्छ जसलाई डङ्गुवा भनिन्छ । डङ्गुवाको कुनै अधिकार हुँदैन । तर यो चलन आजकल क्रमसः लोप हुँदै गएको छ । मागी विवाह गर्दा केटाको तर्फबाट केटाको बाबु सहित ५ जनाको टोली केटीको घर जान्छन् । केटाको बाबूले केटीसंग सामान्य वार्तालाप गर्छन् र फर्कन्छन् । फर्कदा यदी कुनै अशुभ घटना घट्यो भने त्यो केटीसितको विवाह प्रस्ताव अघि बढ्दैन । यदी त्यस्तो केही नभएमा वा केटी चित्तबुझ्दो लागेमा करवाको माध्यमबाट विवाहको प्रस्ताव अगाडि बढाइन्छ र पुनः भेट गर्ने मिति तय गरिन्छ । केटी माग्न केटीको घरमा जाने बेलामा घरबाट निस्कँदा ढोकामा कलस र दूबो राखिन्छ र अलिकति दूवो झिकेर दाहिने कानमा सिउरिदैं केटीको घरतिर हिडिन्छ । केटीको घरमा पुगेपछि केटाका बाबु लगायतको टोलीलाई भव्य स्वागत गरिन्छ । केटाको बाबु लगायतको टोलीको गोडा धुने, तेल लगाइदिने काम गरिन्छ । त्यहाँ पनि ढोकामा दूबो कलस राखिएको हुन्छ र सोही दूबो केहि लिएर पाहुनाले दाहिने कानमा सिउरे पछि पाहुनालाई आँगनमा राखिन्छ यसलाई आँगनचढानी वा चुक्ती भनिन्छ । केटीलाई पनि सोही आँगनमा बोलाइन्छ । केटाको बाबुले केटीका हात हेर्छन् र हत्केलामा दही र बेसार मिश्रित मसीको ५ रेखा कोरि दिन्छन् जुन कार्यलाई केटापक्षको कूलप्रवेशका निम्ति केटीलाई औपचारिक निम्तो दिएको मानिन्छ र विवाह पक्का गरिन्छ । यसैबेलामा केटापक्षबाट केटाको बाबुले केटीलाई गच्छे अनुसार चुमान अर्थात् नगद, सुन आदि दिने प्रचलन छ ।
२.१.४ मृत्यु संस्कार : राजवंशीहरूको मृत्यु संस्कारलाई चार खण्डमा बाँड्न सकिन्छ (१) दाहसंस्कार वा सोदगोद (२) तिन सिनान (तेरात) (३) माथा कामनी (खाउर) र (४) भोज । राजवंशी समुदायमा चिहानमा गाडेर वा चितामा जलाएर दाह संस्कार गरिन्छ । यो कुरा मृतकको परिवारमा भर पर्दछ । दाहसंस्कार पछि मालालुआ कात्रिया (क्रियापुत्री) लाई नयाँ सेतो वस्त्रमा १३ दिनसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । दाहसंस्कारको तीन दिन पछि तीन सिनान तेरात (श्राद्ध) गरिन्छ । उक्त दिन किर्तिनियाद्वारा बाजा बजाई मृतकको घरदेखि घाटसम्म क्रियापुत्री र गाउँले, छरछिमेक, नाताकुटुम्बहरू जान्छन् । किर्तिनियाले शोकधुन सुनाउँछन् र पिना र तेल र पिण्ड चढाइन्छ । नदीमा नुहाएपछि आ–आफ्नो केसमा तेल दलिन्छ । तीनदिन पछि ज्वाईचेला र छिमेकहरू चोखिन्छन् । मृतकको घरमा भने १३ दिनसम्म कर्मकाण्ड पूरा गरि स्वस्तिशान्ति गरिन्छ । मृतकका परिवारका सदस्यहरूको खाउर अर्थात् मुण्डन गरेपछि गोसाइ अर्थात् कुलगुरुबाट मृतात्मालाई स्वर्ग पठाउने परम्परा छ ।
२.२ महत्वपूर्ण चाडपर्वहरू : सिरुवा, जितुवा, दधिकाद, जात्रा, गोरुऔंसी, एकादशी, डोलपावनी प्रमुख पर्व हुन् । यसको साथै डोलपर्व र पो खाँदै फागु पर्व मनाइने चलन छ । राजवंशीहरूले आफूहरूलाई क्षेत्रीयकूलको राजपरिवारका सदस्य मान्दछन् तसर्थ उनीहरूका चाडपर्व हिन्दूपर्व हुन् । दशैं, तिहार, शिवरात्री, अनन्तव्रत र जन्माष्टमी पनि मनाउँछन् । उनीहरू फगुवालाई सबैभन्दा ठूलो चाड मान्दछन् । यो पर्व रङ खेलेर हर्षोल्लासका साथ मनाउँछन् । यसबाहेक सिरुवालाई दोस्रो ठूलो पर्व मान्दछन् । यस अवसरमा ग्रामयानहरूमा पूजाआजा गर्ने र मेला घुम्ने चलन छ । एकादशीको व्रत बस्ने तथा रक्षावन्धनका अवसरमा राखी बाँध्ने चलन छ । यिनीहरूमा मैथिली सँस्कृतिको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पाइन्छ ।
३ शिष्टाचार : राजवंशी समाजमा शिष्टाचारलाई विशेष महत्व दिइन्छ । मान्यजनलाई भेट्दा आफूले लगाएको जुत्ता, चप्पल खोलेर प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, बन्दगी, डन्डोत गरिन्छ । आजकल नमस्कार, नमस्ते गर्ने चलन बढेको र डन्डोत गर्ने प्रचलन कम भएको छ । घरमा महिलाको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । घरमा आमाको खटनपटन बढी चल्छ । अभिभावक वा अभिभावकको स्वीकृति बिना छोरीचेली बाहिर हिड्नडुल्न इज्जतको बर्खिलाप मानिन्छ ।
५ कला : राजवंशी समुदायमा गीतसंगीत, नाचगान, तथा वाद्यवादनको महत्वपूर्ण स्थान छ । समुदायमा दुई प्रकारका गीत पाइन्छन्– (१) धार्मीक लोकगीत (२) सामाजिक लोकगीत । धार्मिक लोकगीत अन्तर्गन गाइन रावनिआ, किर्तिनिआ, तिस्ताबुढी गाअन, डोलेर गाअन, हरिलोट, कुआलिर गीत, गुनेरगीत, चोर–चोनिरगीत प्रमुख छन् जो विभिन्न धार्मिकपर्वहरूमा गाइन्छन् । सामाजिक लोकगीत अन्तर्गत नटुआ गाअन, पाचाली गाअन, सास्तरी गाअन, लाहाङकारी गाअन, हुदुरधुरा गाअन, बेहार गाअन, लग्नी गीत पर्दछन् (को.रा.मु.मो., २०६६) जो विभिन्न वार्षिक पर्वहरूमा गाइन्छन् ।
७. नृत्यहरू : नटुवा, ढोल, गाउन, चपनहाइ, हुदुरधुरा, बडानाच पारम्परिक रूपमा पाइएको र हाल आएर आधुनिक स्टेज कार्यक्रमहरू पनि लोकप्रिय भएका छन् (Voice of Rajbanshi, 2012)
८. भेष–भूषा र विन्यास : राजवंशी महिलाको परम्परागत भेषहरूमा पेटानी, गाजी, बाराहाती, झाङ्गा गटी हुन् भने पुरुषहरूको धोती, गाम्चा, पाजाल, चादार, कमिज, पगडी, लङौटी र कछाड हुन् । किशोरकिशोरीले प्रायः रातो, निलो रङ्गको पेटानी, विवाहितले रातो र वृद्धाले सेतो कालो रङ्गको पेटानी बढी रुचाउँछन् । बेहुलीले लगाउने पहिरनलाई बरहथी परिधान भनिन्छ जसमा १६ हातको गुलाबी रङ्गको पेटानी रहन्छ । घघरी अर्थात् घुँघछ ५ हातको हुन्छ जसले मौर अथवा मुकुट बनाउन समेत पुग्दछ । आजकल यो जातिमा साडि ब्लाउज, कमिज, सर्ट पैण्टको प्रचलन बढेको छ (श्रेष्ठ, ईश्वरगोविन्द, २०४२) ।
१०. खानाका परिकार : राजवंशी भान्सामा भात, दाल, भाजी, अचार, खसीको मासु, माछा, मुरी, चिउरा, दही प्रमुख खानका परिकारहरू हुन् । यसका साथै पेल्का, कान्जी, खारी, घोलटोल, सुकाती जस्ता परम्परागत झोलिलो खाद्यपदार्थ वा सूप खाने चलन छ । यसका साथै समुदायमा भक्का र पानको पनि विशेष महत्व छ ।
११. सामाजिक अवस्था : प्रस्तुत आलेखका लेखकले झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा लक्षित रेन्डम सेम्प्लिङ पद्धति अनुसार ३७५ राजवंशी घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षण, ४ सामुहिक छलफल र १५ गहन अन्तर्वार्ताका आधारमा नेपालका राजवंशीका सामाजिक अवस्था निम्नानुसार भएको पाइयो । राजवंशी जातिमा सरदर धरपरिवार संख्या ४.१४ रहेको छ । ५८.९ प्रतिशत मजदुरी, १६.५ प्रतिशत कृषि, १४.९ प्रतिशत नोकरी र ८.८ प्रतिशत व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । ३८.४ प्रतिशत राजवंशीलाई ६ महिनाभन्दा कम मात्र आफ्नो आम्दानीले खान पुग्छ । २९.१ प्रतिशतलाई आम्दानीले ६ महिनासम्म खान पुग्छ । वर्षभरि खान पुग्नेको अनुपात समुदायमा केवल एकतिहाई भन्दा कम अर्थात् ३२.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजवंशी समुदायमा २१ प्रतिशत बालबलिकामा र १५ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता भेटिएको छ । राजवंशी बालबालिका ५० प्रतिशत कुपोषित छन् । यो समुदायमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको बालमृत्युदर ७५ प्रति १००० जीवित जन्म पाइएकोले यो स्थिाति नेपालको सरदर (५४/१०००) स्थिति भन्दा निकै उच्च देखिन्छ ।
Previous: फेसबुकबाट पुस्तक लोकार्पण
Next: उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरु पुरस्कृत